ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ကျောက်မီးသွေးမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် GE International Inc အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင်သည် GE International Inc အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အဆောင်အမှတ် (I-8) အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ အရေးပါမှုများ၊ ကျောက်မီးသွေးမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့်တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေး ကော်မတီနှင့် ဝန်ကြီးဌာန(၈)ခု၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့(၂)ခုတို့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းဝေး(၂၁/၂၀၁၇)ကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အဆောင်အမှတ် (I-3) ၌ လက်ခံကျင်းပသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အတွင်းရေးမှူး ဦးဇုံးတိန့်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ကြီးဌာန (၈) ခုတို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ (၂) ခုတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စက်မှုလက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်းဇော်သည် GE အဖွဲ့အား ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-8) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း WFD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဗြိတိန်လွှတ်တော်မှ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် WFD (Westminster Foundation for Democracy) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-11) ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ရင်းနီး ပွင့်‌လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် မေးမြန်းဆွေး‌နွေး‌ကြသည်‌။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် IPU ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ် မန်နေဂျာ Ms. Norah Babic ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် သည် IPU ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ် မန်နေဂျာ Ms. Norah Babic ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် လွှတ်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများ၊ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ IPU ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးတို့ နှင့်‌ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် နီပေါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့်‌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Hon. Mr. Madhav Kumar Nepal ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် နီပေါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သူ Hon. Mr. Madhav Kumar Nepal ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံများနှင့်‌ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
နိုင်ငံတော်သြဝါဒါစရိယဆရာတော်၊ မဟာဝိသုတာရာမ ‌ဈေးကုန်း ကျောင်းတိုက်၊ ပဓာန နာယက ဆရာတော်ကြီးအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညို
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီအချိန်တွင် စာချစာသင် (၇၅)နှစ်ပြည့် စိန်ရတုပူဇာမင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ မဟာဝိသုတာရာမ ‌ဈေးကုန်းကျောင်းတိုက်သို့ သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံတော်သြဝါဒါ စရိယဆရာတော်၊ မဟာဝိသုတာရာမ ‌ဈေးကုန်း ကျောင်းတိုက်၏ ပဓာနနာယက အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌဂုရု ဘဒ္ဒန္တ ကဝိသာရ မဟာထေရ်မြတ်ကြီးအား ဖူးမြော်ကြည်ညိုကာ လှူဖွယ် ဝတ္တုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။